I-Qatar Airways kunye neAir Canada zisayina isivumelwano sokwabelana ngekhowudi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Qatar Airways kunye neAir Canada zisayina isivumelwano sokwabelana ngekhowudi
Airlines • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • Iindaba zaseQatar zokuqhekeka • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Qatar Airways Uyonwabile ukwazisa ukuba usigqibile isivumelwano sokwabelana ngekhowudi neAir Canada esebenzayo kuhambo phakathi kweDoha neToronto. Ukuthengisa kuqalile ngenqwelomoya yokuqala yokusebenza ngenqwelomoya ukuqala ngomhla we-15 kweyoMnga yowama-2020. Isivumelwano siqinisa ukuzibophelela kwexesha elide kweQatar Airways kubahambi baseCanada, kunye nokunyusa unxibelelwano lweCanada kwihlabathi liphela ukuxhasa ukubuyiswa kwezokhenketho kunye norhwebo.
Abagibeli beQatar Airways ngoku banokonwabela ukungabinamthungo, ukudibanisa indawo enye ukuya nokubuya eToronto ngeSikhululo seenqwelomoya esiBalaseleyo kuMbindi Mpuma, kwiSikhululo senqwelomoya saseHamad. Abakhweli beAir Canada bayakuxhamla ngokwazi ukubhukisha uhambo ngeenqwelomoya zeQatar Airways phakathi kweToronto neDoha ukuya phambili kwiindawo ezingaphezu kwama-75 eAfrika, eAsia nakuMbindi Mpuma.
UMlawuli oyiNtloko weQatar Airways Group, oHloniphekileyo uMnu. Akbar Al Baker, uthe: “Kuyasivuyisa ukukhusela esi sivumelwano sokwenza isivumelwano kunye neAir Canada ukubonelela abahambi bethu ngohambo olungenamthungo ukuya nokubuya eToronto ngokugqwesa kwilizwe laseburhulumenteni. ubugcisa kunye neenqwelomoya ezizinzileyo, ukhuseleko, intuthuzelo kunye nenkonzo yokuhamba. Isivumelwano siyonyusa ukhetho kumawakawaka abakhweli kwaye sivumele unxibelelwano olugudileyo kwinani elibalulekileyo leendawo ezintsha-ngakumbi kwi-Afrika iphela, eAsia nakuMbindi Mpuma. Ngokusebenzisa amandla ethu axhasayo, esi sivumelwano siza kubonelela ngezibonelelo ukunceda ukubuyela kukhenketho lwamazwe aphesheya. ”
I-Qatar Airways iqale ukubhabha isiya eCanada ngoJuni ka-2011 ngeenqwelo-moya ezintathu eziya eMontreal ezithe zanda zaya kwezine ngeveki ngoDisemba ka-2018. I-airline isebenze ngokusondeleyo noRhulumente waseCanada kunye nabameli balo kwihlabathi liphela kulo bhubhane, besebenza okwethutyana iinkonzo ezintathu ngeveki I-Toronto ukongeza kwiinqwelo moya eziya eVancouver ukunceda ukuzisa ngaphezulu kwabagibeli abangama-40,000 ekhaya eCanada.
Utyalomali olucwangcisiweyo lweQatar Airways ngeendlela ezahlukeneyo ezonga amafutha, iinjini ezinamawele, kubandakanya neyona nqwelo moya inkulu yeAirbus A350, iyenze yakwazi ukuqhubeka nokubhabha kuyo yonke le ngxaki kwaye iyibeka kwindawo efanelekileyo ukuze ikhokelele ekubuyiseni okuzinzileyo kohambo lwamanye amazwe. I-airline kutshanje ithathe ukuhanjiswa kweenqwelomoya ezintathu ezintsha zeAirbus A350-1000, inyusa iinqwelo zayo zizonke ezingama-A350 ukuya kuma-52 kunye neminyaka yobudala eyi-2.6. Ngenxa yempembelelo ye-COVID-19 kwiimfuno zohambo, inqwelo moya yabeka inqwelomoya yayo yeAirbus A380s njengoko kungagunyaziswanga ngokusingqongileyo ukuba isebenzise inqwelomoya enkulu eneenjini ezine kwintengiso yangoku. I-Qatar Airways isandula ukwazisa ngenkqubo entsha eyenza abakhweli ngokuzithandela ukuba basuse ukukhutshwa kwekhabhoni okunxulunyaniswa nohambo lwabo kwinqanaba lokubhukisha.
Ukuphela kweXesha loBusika le-IATA, iQatar Airways icwangcisa ukwakha uthungelwano lwayo kwiindawo ezili-126 ezibandakanya ezingama-20 eAfrika, ezili-11 eMelika, ezingama-42 eAsia-Pacific, ezingama-38 eYurophu nezili-15 kuMbindi Mpuma. Iidolophu ezininzi ziya kubonelelwa ngeshedyuli eyomeleleyo rhoqo rhoqo okanye nangaphezulu.